Shakkamtoonni maamiltoota Baankii irraa Birrii miiliyoona 60 ol waliin dhahaan too’ataman – Fana Broadcasting Corporate
Shakkamtoonni maamiltoota Baankii irraa Birrii miiliyoona 60 ol waliin dhahaan too’ataman
Finfinnee, Onkololeessa 28, 2012 (FBC) – Shakkamtoonni Cheekoota hatamanii fi sanadoota sobaa fayyadamuun maamiltoota baankii mootummaa fi dhuunfarraa Birrii miiliyoona 60 ol waliin dhahuun shakkaman too’annoo jala oolchuu Komishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksise.
Gareen qorannoo fi hordoffii Poolisii Feedeeraalaa fi Komishiinii Poolisii magaalaa Finfinnee walitti dhufe dhimmicha qulqulleessuu eegaluu Komishinichaatti Itti gaafatamaan qajeelcha qorannoo saamichaa fi hanna olaanaa Insipeektar Yaareed Alamaayyoo ibsaniiru.
Shakkamtoonni 70 ol ta’an herreega maamila dhuunfaa keessaa Birrii miiliyoona 60 fi kuma 843 fi 601 bahii gochuun fudhachuu isaanii qorannoon mirkanaa’uu dubbatameera.
Haaluma walfakkaatuun Birriin miiliyoonni 28 ol ammoo hatamuuf osoo adeemsa irra jiru baraaruun danda’amee jira jedhameera.
Cheekoota baankii garaa garaa fi yakkicha raawwachuuf meeshaaleen gargaaraa hedduun too’annoo jala ooluu himameera.
Kanumaan walqabatee lakka herreegaa baankii shakkamtootaa keessatti Birriin miiliyoonni 16 kan argame yoo ta’u, dhorkaan irratti godhamee jiraachuu ragaan argame ni muul’isa.
Shakkamtoonni kunneen yakka kana kan raawwatan odeeffaannoo hojjettoota Teeleekoomii,Baankoota Bulchiinsa aanaalee,Waajjira Mirkaneessa Galmeessa Sanadootaa keessaa qopheeffataniin ta’uu tuqameera.
Miseensoonni garee dippilomaasii Paabilikii Sudaan daawwanaaf Finfinnee galan